China ezigbo ọnụahịa china ngwaahịa ọhụrụ ihe ọkụkụ ọhụụ na-emepụta ginger na ndị na-eweta ya | AGR
Nri oriri na-edozi ahụ:
ohuru ginger nwere nhichapu mmetuta ogwu, ginger na ginger n'ime ahu, nke a nwere ike meputa enzyme antioxidant, o nwere ikike siri ike imeri ihe ndi oxygen, kamakwa karia vitamin E.
Jinja nwere ike kpalite mucosa gastric, na-ebute etiti vasomotor na ọmịiko na-enwe mmetụta agụụ mmekọahụ, na-akwalite mgbasa ọbara, na-arụ ọrụ afọ, na mgbu afọ, ọsụsọ, mmetụta antipyretic. Jiang na-emekwa ka ihe nzuzo nke mmiri gastric na eriri afọ na-arụ ọrụ, na-enyere mgbaze aka; ginger zingiberene, zingerone enwere ọrụ doro anya na ịkwụsị ịgba agbọ.
Jinja nwere oke igbochi fungal anụ ma gbuo Trichomonas vaginalis mmetụta, na-emeso ọtụtụ carbuncle fụrụ akpụ.
Jinja na-egbochi ọrụ cell cancer, belata mmetụta na-egbu egbu nke kansa, nwere ike ịrụ ọrụ mgbochi kansa.
Jinja nwere ọsụsọ na-ebelata, kpoo ụkwara ume ọkụ, nsị, nwere ike ịgwọ oyi, afọ oyi, ịgba agbọ, ụkwara oyi, ụkwara afọ, afọ ọsịsa, na ọrịa ndị ọzọ na nsị nshịkọ.
N'ihi na ginger ntutu na-adapụsị ntutu dị iche iche nke ginger
Jinja bu osisi okooko osisi aha ya bu Zingiber officinale. Rhizome, nke a na-akpọkarị mgbọrọgwụ, bụ ihe ị maara maara nke ọma. Mgbọrọgwụ na-ekpo ekpo na ose dị na ekpomeekpo, na-ebu ibu ọgwụ. A na-eji ya eme ihe n'ụwa niile maka nri na ngwa ngwa-maka ezigbo ihe kpatara ya
Jinja bụ ahịhịa na-adịkarị nke a na-akụkarị na etiti, ndịda ọwụwa anyanwụ na ndịda ọdịda anyanwụ China, ma na-akọwakarị na Asia na-ekpo ọkụ. A na-eji rhizome eme ihe maka ọgwụgwọ, na ngwaahịa ọhụrụ ma ọ bụ nke a mịrị amị nwere ike iji mee ihe eji esi nri ma ọ bụ mee pickles na sugar ginger. Enwere ike ịmịpụta mmanụ na-esi ísì ụtọ site na osisi, epupụta, na rhizomes, ma jiri ya na nri, ihe ọveraụ beụ na ihe na-esi ísì ụtọ.
Ọhụrụ ginger nwere ike ịmepụta ihe ụtọ dị ebube ma nwee mmetụta bara uru nke mbenata nje, na-eme ka obi dị mma na ọgụ.
Nke gara aga: ọnụ ala price na nnukwu ọhụrụ organic garlic ntupu akpa price nke garlic
Osote: elu mma kacha mma kacha mma Shandong ohuru na-eto eto odo odo ginger
elu mma kacha mma kacha mma price Shandong ọhụrụ oseose yo ...
Best Price Chinese Export New ubi ọhụrụ Fresh ...
mbupụ N'ogbe ọhụrụ akwụkwọ nri ginger na ga ...